Ruza Reservoir - माछा मार्ने लागि ठूलो ठाउँ!
Ruza Reservoir Palashkino को गाउँमा नजिकै नदी Ruza, एक बाँध संग मास्को नदी एक tributary मा स्थित छ। यो 30 भन्दा बढी मी पाठ्यक्रम साथ खसे। यो यस्तो Pednya, दायाँ Pednya, Bristle, Voloshnya र धेरै प्रवाहको रूपमा नदी मा प्रवाह।
यहाँ पानी को एक शरीर छ
Ruza जलाशय 1966 मा पानी भरिएको थियो। यसको मात्रा 216 मिलियन क्यूबिक मिटर छ। पानी पु, र क्षेत्र - 33 वर्ग। मी। जलाशय अधिकतम चौडाई चार किलोमिटर पुग्छ। पानी शरीर विभिन्न भागमा गहिराई Ruza reservoirs, फरक छ गहिरो ठाँउ, बाँध नजिकै च्यानल 21 मीटर पुग्छ। 25 मीटर - यो बाँध को लम्बाइ 550 मिटर र अधिकतम उचाइ छ। सामान्यतया, पानी छुट्टी 18.5 मीटर को स्तर जब गरिन्छ। Ruza Reservoir navigable छ। नोभेम्बर को अन्त सम्म यो स्थिर, र अप्रिल को सुरुमा खुलेको छ। पानी स्तर मा उतार चढाव पाँच मिटर पुग्यो छ। खैर, सबै भन्दा कम स्तर बस बाढी अघि, मार्च अवलोकन। र उच्चतम - मई मा, बरफ को पग्लिने पछि।
राजधानी वसोवास लागि सक्रिय मनोरञ्जनको लागि मनपर्ने स्थान
पानी को यो शरीर को मुख्य उद्देश्य - राजधानी को पानी आपूर्ति, साथै, यो अपवाह नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ Ruza नदी। र, को पाठ्यक्रम, एक विशाल ताल एक लोकप्रिय मनोरञ्जन क्षेत्र छ। जलाशय को त्यहाँ धेरै मनोरञ्जन केन्द्र र अग्रगामी शिविरमा रहेका बैंकहरू मा, साथै, त्यहाँ एक माछा मार्ने आधार, साथै गाउँमा र Bielany पहाड Ostashevo को गाउँ हो। नियन्त्रण Reservoir शिकार र माछा मार्ने मास्को। आफ्नो आधार Shcherbinka को गाउँमा स्थित छ।
मास्को नजिकै यो पोखरी सधैं ठूलो ब्रीम, पाइक-अड्डा र अड्डा को उपस्थिति को लागि प्रसिद्ध छ। तर, हालका वर्षमा यो एक दुःखी भाग्य भोगे Mozhaiskogo जलाशय। किनभने ठूलो srabotok पानी स्तर को एक प्रकोप ligulosis थियो। यो आक्षेप माछा असर जो एक व्यापक रोग, छ; यो Ligulidae plerocercoids कारण। तिनीहरूले माछा भुँडी infest र बाँझोपन, आन्तरिक अङ्गहरू, पेट पर्खाल बिच्छेद, जलाशय बासिन्दाहरू को मृत्यु परिणामस्वरूप को atrophy प्रकुपित। यस कारण पर्यावरणीय प्रकोप जलाशय मा पर्याप्त ब्रीम र चाँदी ब्रीम संख्या कम। साथै, एकदम मूल को आफ्नो स्थान पाइक पकड कम र अड्डा। अड्डा को जनसंख्या पुनर्स्थापना काम को एक धेरै Hunters र Fishermen को मास्को समाज आयोजित। तर, यो काम को परिणाम केही वर्ष मा देख्न सकिन्छ।
र अझै ...
Ruza Reservoir मा माछा पकडने माथिको-वर्णन विनाश बाबजुद spinnings, kruzhochnikov र poplavochnikov लागि ठूलो चासो छ। यो पोखरी धेरै IDE, मछली, अड्डा एकदम ठूलो (1 किलो पहिलो बरफ अप को राम्रो-समातिए नमूनों) छ। त्यहाँ ASP, शायद एक ठूलो आक्षेप मार्फत आउनुहोस्। तसर्थ, खाडी Kurowski मा, जो को गहिराई मात्र दुई मीटर, अन्तिम ठूलो बरफ समातिए अड्डा र ठूलो मछली छ।
माछा मार्ने सुविधा
यो जलाशय मा समाज स्वामित्वको दुई आधारमा छ। Ostashevo को गाउँमा, माथिल्लो पुग्छ मा - तिनीहरूलाई एक Palashkino को गाउँमा र दोस्रो निकट, जलाशय तल्लो पुग्छ मा स्थित छ। यहाँ तपाईं माछा पाठ्यक्रम डुङ्गा भाडामा र, रात को लागि रहन सही दिन जो टिकट, खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। सान्त्वना प्रेमीहरूको जहाँ तपाईं माछा मार्ने र राम्रो बाँकी संयोजन गर्न सक्छन् अस्पताल "रूस", मा Palashkino नजिकै रहन रुचाउँछु। को अस्पताल नजिकै जलाशय को गहिराई 10-13 मीटर छ, त्यसैले त्यहाँ अझै पनि यी पानी पाइन्छ जो पनि ठूलो ब्रीम, फसाउन राम्रो मौका हो। र विपरीत बैंक मा, नजिकै बाँकी घर "Meadows", विपरीत, एक खोक्रो तल, सानो गहिराई संग मा। त्यसैले, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो को प्रशंसक छुट्टी को प्रकार , तपाईं Ruza Reservoir मा साइटहरु कुनै पनि आवश्यकताहरू पूरा गर्न पाउन सक्नुहुन्छ।
"विदेशी" उपनगरीय reservoirs लागि माछा को प्रजाति
संग Ruza Reservoir अन्तिम शताब्दीको 60-एँ मास्को पुल निरीक्षण नियन्त्रणमा राज्य सांस्कृतिक माछा खेत द्वारा सिर्जना गरिएको थियो। आफ्नो काम को परिणाम एक तालाब यो क्षेत्रका लागि त असामान्य टन्न भरेर थियो, आक्षेप, जस्तै प्रजाति घाँस आक्षेप, ट्राउट, eel, Bester (beluga र sturgeon संकर)। ती सबै सफलतापूर्वक जलाशय मा मूल लिएका छन्, र माछा को यस क्षेत्रमा प्रजाति लागि सामान्य संग सह-अवस्थित: Pike, burbot, मछली र अरूलाई। तर, Ruza "विदेशी" मा जलाशय मा माछा मार्ने धेरै चुनौतीपूर्ण ट्राउट प्रकार र अन्य प्रतिनिधिहरु एक हुक मा समातिए गर्न चाहनुहुन्छ छैन। मात्र "लाग्छ" कसरी बुझ्नुहुन्छ गर्ने साँचो व्यावसायिक माछा एक पदक पकड गर्न सक्नुहुन्छ।
जाडो माछा मार्ने
मनोरञ्जनको यस प्रकारको माझिहरु संग धेरै लोकप्रिय छ। को Ruza पानी जलाशय एउटा जाडो माछा मार्ने - यो कुरा हो! कुनै आश्चर्य यो र मास्को वरिपरि धेरै मानिसहरू आकर्षित गर्छ। उदाहरणका लागि, Ruza रोजेको गर्ने, सबै भन्दा anglers यस्तो पहिलो बरफ मा सक्रिय काट अड्डा, पानी को यो शरीर रूपमा, कतै छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यहाँ हिउँदमा अड्डा greedily परम्परागत अड्डा स्पिनर्स सबै प्रकारका मा pounced: घुमाव, ठाडो, ठाडो beznasadochnye जिग ( "परी", "बाख्रा", "शैतानको") पाठ्यक्रम, मानक जिग खचाखच भरिएको bloodworm र, प्राथमिकताको पीतल वा तामा crowns। बरफ को गठन पछि गहन काट ठूलो अड्डा एक महिना बारेमा रहन्छ। खोक्रो पानी मा जाडो पदक को दोस्रो आधा देखि धेरै shallower छ। मा ठूलो विशेष हेरविचार शीर्ष Ruza Reservoir, त्यसैले अत्यन्तै दुर्लभ मार्फत आउनुहोस्। यो ताल मा Okunev सर्वश्रेष्ठ ठाँउ यसको मध्य भाग हुने मानिन्छ। यो विपरीत Sherbinki (यो एक दूरी देखि देखिने छन् कि चड्डी poluzatonuvshih रूखहरू मा फेला पार्न सजिलो छ), र Akatova र Ovsyanikov को खाडी snags। पार्किङ अड्डा अक्सर किनारमा (दूरी 60-70 मीटर) को दोस्रो किनारा नजिकै स्थित, गहिराई यहाँ 3-5 मीटर पुग्छ।
माझिहरु बीच धेरै लोकप्रिय Rouses माछा मार्ने walleye उठाउँछ। Shcherbinka र Tokarev र Kurovo र Lachine र द्वीप वरिपरि को क्षेत्र मा यो माछा खडा रुचि जो predruslovye गहिरो किनारा छन्। हिउँदमा, क्लासिक pointy balancers र vertikalka मा बरफ अड्डा baubles। मछली, crucian, एक धूमिल र साना अड्डा: र गर्मी मा, माछा मार्ने को प्रभाव को सबै भन्दा नियमित मग मा एक ठूलो पाइक अड्डा, एक चुच्चो प्रत्यक्ष चारा प्रयोग गर्न राम्रो छ रूपमा प्रदान गर्दछ। प्रशंसक एक जिग, प्रयोग गरिन्छ चारा रूपमा प्रयोग कताई मत्स्य पालन गर्ने फोम माछा वा चम्मच। तर, कताई सामान्यतया कुनै 2.1 भन्दा बढी किलो वजन सानो वस्तुहरू पक्रेको छ।
toothed predator पक्रने
Hotebtsevo र Bunin मा Ruza Reservoir छलफल बे मा पाइक लागि सबै भन्दा राम्रो ठाउँ। यहाँ माछा pondweed को बाक्लो thickets मा रहन रुचि। यसलाई पूर्ण एक चम्चा-nezatseplyayka तामा र इस्पात रंग मा समातिए। यसलाई अनिवार्य शैवाल अपनाउँछन् रूपमा खत्तम, पोपर लाग्छ। को snags र खुला पानी पाइक पारंपरिक turntables र kolebalok समातिएको। सामान्यतया, स्पिनर्स र नरम प्लास्टिक चारा मा ठूलो नमूनों, तपाईं पानी निकायको लगभग कुनै पनि भाग पकड गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी पाइक 3-7 मीटर को एक गहिराई मा लाइन मा खडा गर्न रुचि। यसरी, कताई द्वारा एक बिन्दुमा केही अवस्थामा तपाईंले केही राम्रो ठूलो नमूनों पकड गर्न सक्नुहुन्छ। पाइक एक धेरै को गाउँमा र Demidkovo Meadows नजिकै र मनोरञ्जन केन्द्र "रस" को अगाडि predruslovogo गोठ नजिकै snags खडा।
Ruza Reservoir मा माले
व्यावसायिक माझिहरु र यो जलाशय बाँकी जस्तै एमेच्योर को समीक्षा मुस्लिम लागि Ruza Mecca के तुलना गर्न सकिन्छ कम छन्। यहाँ वर्षैभरि हजारौं आकर्षित, र सबै, अपवाद बिना, उत्कृष्ट माछा मार्ने सन्तुष्ट छन्। आक्षेप प्रजाति र पाइक-अड्डा मा गिरावट बावजुद Ruza Reservoir अझै पनि मास्को नजिकै पाँच भन्दा माछा ponds बीचमा विश्वास छ। यसरी, हालका वर्षमा एकदम को burbot, मछली र Pike, अड्डा को जनसंख्या वृद्धि र संख्या पछिल्लो दस वर्ष को लागि अपरिवर्तित बाँकी छ।
मुख्य कुरा - नियमहरूमा तोड्न छैन
यो केवल यस बेसिन मा धेरै फरक प्रतिबन्ध र माझिहरु को व्यवहार को नियम छन् कि थप्न रहनेछ। उदाहरणका लागि, जलाशय मा माछा मार्ने कडाई परमिट, किनारमा नजिक मेशिन सेट गर्न निषेधित हो, कडाई पेट्रोल जहाज को बाहिर मोटर्स निषेधित छ। साथै, तपाईंले तिनीहरूलाई bloodworms र प्रत्यक्ष चारा संग ल्याउन सक्दैन - तपाईं स्थान मा किन्न आवश्यक सबै। त्यहाँ निपटने सीमा छ: तपाईं एउटै डुङ्गामा पाँच क्लब अधिकतम प्रयोग गर्न सक्छन् र हिउँदमा - बस पाँच zherlitsy प्रति मछुवा र यति मा। त्यसैले तपाईं बनाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो छुट्टी शान्त थियो, र तपाईं, स्थानीय माछा मार्ने नियन्त्रण अधिकारीहरु संग तर्क गर्न साथै जरिवाना तिर्न, नियमहरूमा उल्लङ्घन छैन छैन।
एक जाडो शिविरमा एक बच्चा पठाउन? किशोरकिशोरीहरूको लागि जाडो शिविरमा
चेक गणतन्त्र मा बिदाहरू
सेतो पोखरी, Ulyanovsk क्षेत्र। सेतो पोखरी, पर्यटक मध्य, Ulyanovsk क्षेत्र
Borovets (स्की रिसोर्ट, बुल्गेरिया): समीक्षा
ग्यारह पेरिस: सफलता को मार्ग र घोटाला संग्रह
प्रसिद्ध रक्सी "शिराज": समीक्षा
ठेगानामा "Marchellis", सेन्ट पीटर्सबर्ग। रेस्टुरेन्ट चेन "Marchellis"
Glycine: साइड इफेक्ट र प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
परिभाषा - शब्दहरू को परिभाषा
एउटा सानो सहरमा सबैभन्दा लाभदायक व्यवसाय के हो? सानो सहरमा लागि लाभदायक व्यवसाय कसरी चयन गर्ने?
कसरी छोराछोरीलाई विकास स्मृति, कविता सिकाउन
Mondragon आत्म-लोड राइफल (मेक्सिको): विवरण, इतिहास र रोचक तथ्य